Global Voices teny Malagasy » Global Voices Rosiana Miara-miasa Amin’ny Neweurasia.net · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Oktobra 2011 10:09 GMT 1	 · Mpanoratra Ekaterina Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ozbekistan, Tajikistan, Tiorkmenistana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Faly izahay mampilaza ny fiaraha-miasa ny Global Voices Rosiana miaraka amin'ny Neweurasia.net , iray amin'ireo sehatry ny valantserasera lehibe indrindra ao Azia Afovoany, izay manana mpihaino Anglisy sy Rosiana marobe.
Miompana manokana amin'ny vaovao sy fanadihadiana nataon'ny tanora avy ao an-toerana ny Neweurasia. Manazava bebe kokoa ny vaovao tsy voatantara tsara ny tranokala ary manolotra sehatra ho an'ny tanora sy ny tia karokaroka mba ahafahan'izy maneho hevitra. Noforonina tamin'ny taona 2005 izany, raha niray hampandroso ny sehatry ny bilaogy ny mpikatroka an-tserasera mba ahafahana mamoaka vaovao haingana sy mivantana.
Tsara tokoa ny manamarika fa iray amin'ireo mpamorona ny sehatra ihany koa ny mpanoratra ao amin'ny Global Voices, Ben Paarman . Androany, rakotra bilaogera avy amin'ny firenena 5 ao Azia Afovoany ny tranonkala (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan ary Uzbekistan), izay samy nizara tantaram-piainana mahavariana, fahombiazana ary fanamby ao amin'ny firenena.
Mba hanomezana lanja izany rehetra izany, hita tokoa fa dingana lojika ny fiaraha-miasa eo amin'ny Global Voices sy Neweurasia.net, amin'ny zavatra sahanin'ny roa tonta sy ny tanjona mitovy izay tratrarin'izy ireo. Faly tanteraka izahay hanomboka ny fiarahamiasanay miaraka amin'ny sehatry ny valantserasera iray mahatalanjona sy malaza mikasika ny faritra Azia Afovoany.
Natomboka tamin'ny fifanakalozana ny fango-nay [logo] ny fiarahamiasa. Mety efa hitanao sahady ny fangon'ny Neweurasia ao amin'ny Global Voices Rosiana  sy ny fangonay mipetraka eo amin'ny Neweurasia teny rosiana, izay midika fa misokatra tanteraka ho an'ny mpamaky Rosiana ny Global Voices. Misokatra hatrany koa ny roa tonta ary tsy manavaka fiarahamiasa hafa izay mety hisy any aoriana any.
Mankasitraka indrindra ireo olona tsy nikely soroka tamin'ny fanatontosana ity fiarahamiasa ity. Araka izany, “fisaorana lehibe” ho an'i Oliver Dams , talen'ny tetikasa no sady talen'ny ara-teknikan'ny Neweurasia.net ary iray tamin'ireo mpanorina ny tranonkala, ho an'i Yelena Jetpyspaeva , tompon'andraikitra ao amin'ny valantserasera Neweurasia.net, noho ny fihainony sy ny hevi-baovao avy aminy.
Manolotra fisaorana ho an'ny ekipan'ny Global Voices Rosiana  ihany koa izahay, ireo mpanoratra sy mpandika teny, tamin'ny lahatsoratra navoakany sy ny fanampiany ka nahatonga ny mpamaky Rosiana ho liana tamin'ny tranonkala.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/30/24790/
 Global Voices Rosiana: https://ru.globalvoicesonline.org/
 ekipan'ny Global Voices Rosiana: https://ru.globalvoicesonline.org/translator-listing/